एसपी ढकालको कर्तुत : 'चोर' को हातमा चाबी
महानगरिय प्रहरी आयुक्त कार्यलय प्रमुख एबं डिआईजी विश्वराज पोख्रेल अहिले नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन आम नेपालीहरुका विच चर्चामा रहेका छन् । उनले कमाण्ड लिएका स्थानमा भावी कमान्डरका लागि छाप छाड्ने गरेका छन । एसपीका रुपमा मोरंङ जिल्लाको नेतृत्व गर्दा तस्कर र गुण्डाहरु उनको नाम सुनेपछि त्राहिमाम हुन्थे । एसएसपीका रुपमा काठमाण्डौ प्रहरी परिसरको नेतृत्व लिँदा शान्ती सुरक्षामा खटिएर उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरे ।
महानगरिय प्रहरी आयुक्त कार्यलय प्रमुखका रुपमा पोख्रेलको चर्चा चुलिएको छ । शान्ती सुरक्षासँगै उपत्यकाका प्रहरी कार्यलयमा सबै प्रहरी अधिकारीको सामुहिक भान्सा घरको प्रचलन स्थापित गरे । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संकमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनमा उनले गरिब, असाहय लगायतलाई राहत समेत बाडेर चर्चा कमाए । तर पनि उनि केहि विवादित झुण्डको पासोभित्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । डिआईजी पोख्रेलले किन बोकिरहन्छ विवादित प्रहरी अधिकारी ? प्रहरी हेडक्वाटरमा यो विषयले निकै भुमिका पाउने गरेको छ । महानगरिय प्रहरी आयुक्तको जिम्मेबारीसँगै उनले काखी च्यापेका दुई एसपीलाई लिएर प्रहरी हेडक्वाटरदेखि गृह मन्त्रालयसम्म यस्तो कुरो उठ्ने गरेको हो । असाध्यै विवादित छवीका एसपी ओम राना र रेवती ढकालका बारेमा सुरक्षा निकायदेखि गृहमन्त्रालय सम्म कुरो उठ्ने गरेको छ।
ओम राना अर्थात रकम भनेपछि त्रिनेत्र बल्ने प्रहरी अधिकारी हुन् । शक्तिकेन्द्रलाई के गर्दा खुशी हुन्छन ठ्याक्कै जानेका छन् उनले । कुनै समय आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी हेडक्वाटर सम्मै परेपछि महानगरिय अपराध महाशाखाले स्पष्टिकरण दिदाँ आफैले बयानमा गुण्डा र चोरहरुसँग ६० हजार मात्र लिएको भनि उल्लेख गरेका थिए । त्यति मात्र होइन उनी रसुवा जिल्लामा रहँदा रक्तचन्दन पास गराउने काममा मुख्य दोषी देखिए शक्तिकेन्द्रका भरमा जोगिएर नसिहत मात्र पाएका थिए तर सोहि मुद्धामा आर्मीका कर्णेल रामजी थापाको जागिर गएको थियो।
नेपाल प्रहरीमा अनियमितता र विवादका शृंखलामा डबल ह्याट्रिक गर्ने प्रहरी अधिकारी हुन् एसपी रेवती ढकाल । एसपी ढकालले त यतिसम्म गरेकी आफुलाई हेडक्वाटर दिएको नसिहत नै गायव गराए । ढकाल कर्मचारी प्रशासन (क.प्र) प्रमुख भएका बेला आफूले पाएको नसिहत नै आफ्नो फाइलबाट झिकेर च्यातिदिएका थिए । उनले नसिहत च्यातेपछि त्यहाँ कै एक कर्मचारीले भने चोरको हातमा चाबी परेको छ । शक्तीमा छँदा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरुप उदाहरण हो यो। ढकाल आफु राष्ट्रपति भण्डारीको नाता भएको दुहाई दिंदै आएका छन्, त्यसैको आडभरोसामा प्रहरी भित्र उनको उदण्ड दुर्योधन प्रवृति चलेको छ । डिएसपी हुँदै कर्मचारी प्रशासन प्रवेश गरेका ढकालले क.प्र मा हुँदा सरुवा बढुवामा व्यापक अनियमितता गर्दै अकुत सम्पति आर्जन गरेको स्रोतले बतायो । उनि जता गयो इन्स्पेक्टर नकुल गौतमलाई संगै लैजाने गरेका छन्, तत्कालिन सई नकुल गौतमलाइ जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा उनले काजमा गृहमन्त्रालय पठाएका थिए, गौतम त्यहाँबाट तत्कालिन माओबादी (केन्द्र) र गृहमन्त्रालय सम्बन्धि सूचना एसपी ढकालको इसारामा कांग्रेसका नेताकोमा पठाउने गर्थे । नेताको चाकडी गर्न खप्पिस ढकाल हाल नेकपा निकट भएका छन्, उनी सरुवा भएर भक्तपुर जिल्ला जानको लागि महेश बस्नेत मार्फत दिलो ज्यान दिएर लागिपरेका छन् । महेश बस्नेत निकट केहि ब्यापारीसंग उनको दैनिक उठबस हुने गरेको स्रोतले बतायो । क.प्र प्रमुख भएका व्यक्तिले पटक पटक अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा दण्डित गर्नुको सट्टा उल्टै काखी च्यापेर हिड्नु कतिको सुहाउने कुरा हो भन्दै मुख्यालयतिर चर्चा चल्ने गरेको छ ।
हेर्नुहोस एसपी रेवती ढकालका विवादका शृंखला :
आकर्षक जिल्लामा जान एसपीहरुको दौडधुप : जसको ठुलो शक्तिकेन्द्र उसैको सरुवा
रक्षक नै भक्षक : डिआईजीको सीआरभी कमान्डर एसपी रेवती ढकालको टोली नै लुटपाटमा संलग्न
छाँया मेट्रोपतिको चम्किलो धन्दा : शक्तिको आडमा रक्सी र चन्दा
एसपी ढकालकाे कर्तुतः कोटेश्वरको प्रहरी भवन निर्माणमा समेत मनोमानी !
एसपी ढकालकाे कर्तुतः तस्करसँग साँठगाँठ, सरकारकाे सत्ताेसराप
अव्यवसायिक गिरोहको दुष्चक्रमा व्यवसायिक प्रहरी डीआईजी पोखरेल